Building Construction and Infrastructure: Testing & Commissioning Process for MEP Systems
Testing & Commissioning Process for MEP Systems
MEP Systems တွေ ကို သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း တပ်ဆင်ပြီး တဲ့ အခါ တကယ် လည်း အလုပ်တယ်၊ လိုချင်တဲ့ (သတ်မှတ်ထားတဲ့) Performances တွေ လည်း ရတယ် ဆိုတာ သေချာကြောင်း သက်သေပြ နိုင်ဘို့ အတွက် Commissioning Process တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ Building Owner ကို ဒီ အဆောက်အအုံ ကြီး ကို အမှန်တကယ် အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောက်လုပ် ပြီးစီးလို့ သွားပါပြီ။ Plans and Specification တွေ နဲ့လည်း Compliance ကိုက်ညီတဲ့ အရည်အသွေး ရှိပါ တယ်။ အသုံးချ နိုင်ဘို့ အတွက် လည်း Operationally and Functionally Ready အဆင်သင့် ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ဒါကြောင့် လက်ခံ လွှဲပြောင်း ရယူတဲ့ Take-over လုပ်နိုင်ပါပြီ ဆိုတာ ကို သက်သေပြ မဲ့ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တာတွေ ကတော့
Verifying the operation of system components under various conditions
Verifying interactions between systems and subsystems
Documenting system performance in reference to design criteria, and
Instructing operators how to operate the building systems and equipment
Building Owner နဲ့ Operators တွေ ကို ပေးမဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေ ကတော့။
Building Systems တွေက ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ အတိုင်း အကောင်းဆုံး efficiency နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ် လုပ်နေတယ်။
Systems တွေကြား (ရှုတ်ထွေးတဲ့ စနစ် တွေကြားမှာ တောင်) အပြန်အလှန် မှန်ကန် တဲ့ Interaction တွေ ရှိနေတယ်။
Maximum Comfort အတွက် System တွေ ကို စနစ်တကျ Balanced လုပ် ပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။
Building System Operators တွေ ကိုလည်း Design Efficiencies ရနေအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း Operate လုပ်ရမလဲ လို့ လေ့ကျင့် ပေးထားပြီး ဖြစ်တယ်။
Post Acceptance Coordination မှာလည်း Design Conditions နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူတဲ့ အခြေအနေ ကို သေချာ ရွေးပြီး မှ စစ်ထားတာ မို့ လိုချင်တဲ့ အရည်အသွေး ရဘို့ သေချာ စေတယ်။
ASHRAE ရဲ့ Definition ကတော့
"The Commissioning Process: is defined asaquality-oriented process for achieving, verifying, and documenting that the performance of facilities, systems, and assemblies meets defined objectives and criteria". Commissioning is an all inclusive process for all the planning, delivery, verification, and managing risks to critical functions performed in, or by, facilities."
လူ အများစု က Commission Process တွေ အားလုံး တပ်ဆင်ပြီး မှ လုပ်ဘို့ လိုအပ်တာ လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက် က တော့ Pre-Design အဆင့်မှာ ထဲက ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု တွေ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု တွေ လုပ်ထားရပါတယ်။ Project Phases အားလုံး မှာ သင့်တော်တဲ့ activities တွေ ပါဝင် ထားပေး ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ အငြင်းပွားမှု တွေ ဖြစ်မလာစေဘို့ အတွက် Contract Specifications တွေ မှာလည်း Commissioning Scope တွေ ကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးထားရပါတယ်။ ဒါမှလည်း လိုအပ်ချက် အလိုက် သင့်တော်တဲ့ Budget တွေ ပါဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်တကျ ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ Commissioning Standards Manuals တွေ နဲ့ Certifications တွေ ပေးနိုင် တဲ့ Standard Organizations တွေ က တော့။
ASHRAE ( American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.)
ခု တစ်ပါတ် မှာ Commissioning Process တွေ အကြောင်း ကို မိတ်ဆက် ပေးထား ပါတယ်။ Systems တစ်ခု စီရဲ့ အသေးစိတ် ကို တော့ နောက်ကြုံတဲ့ အခါ အလျင်း သင့်သလို တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Post မှာ တင်ပြမဲ့ အစီအစဉ် ကတော့။
Key Commissioning Activities
Commissioning Scopes & Systems to be Commissioned
Commissioning Procedure (1) : Planning & Documentations
Commissioning Procedure (2) : Field Activities
Commissioning Procedure (3) : Final Reports
Commissioning Specialists in Singapore
Commissioning Teams မှာ ပါဝင်ပတ်သက် ရမဲ့ သူတွေ ကတော့။
အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင် (Owner)
အဆောက်အအုံ ကို အမှန်တကယ် သုံးပြုမဲ့ သူ (End-User )
ဒီဇိုင်းလုပ်သူ များ (Architects, MEP Engineers)
ကန်ထရိုက်တာ များ (Main Contractor, Sub Contractors, …)
TAB (Testing, Adjusting and Balancing) Commissioning Agents
Building Operating & Maintenance Staffs
အားလုံး မှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါမယ်။
Comprehensive Commissioning လုပ်ချင်တဲ့ Owners တွေ အနေနဲ့ Pre-Design Stage မှာထဲက စိတ်ကြိုက် Commissioning Agent ကို တိုက်ရိုက် ခန့်အပ် ရွေးချယ် တာဝန်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ အခြေအနေ မှာ Commissioning Agent က သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်တိုင်း မှာ သင့်တော်သလို ပါဝင် ပတ်သက်ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Owners နဲ့ Engineers တွေ က ဘယ်လောက်အဆင့် အထိ Commissioning လုပ်ချင်တယ် ဆိုတာ ကို ကြိုတင် သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ Commission Scope နဲ့ Specification အသေးစိတ် ကို သတ်မှတ် ပေးရပါမယ်။ ဒီလို အဆင့်တွေ အတွက် Commissioning Specialist ရဲ့ အကြံပြုချက် ကို ဆွေးနွေး ရယူနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက် ထဲမှာ ပါတဲ့ လိုအပ်ချက် တွေ ရဘို့ Commission လုပ်ရမဲ့ သူတွေ နဲ့ တာဝန်တွေ ကို လည်း ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Contractor / Commissioning Agents တွေ က လည်း ဒီ သတ်မှတ်ချက် တွေ ကို ရအောင် လုပ်ပေးဘို့ Contract ရထဲက သဘောတူ ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး တကယ်ရအောင် လည်း လုပ်ပေး ရပါမယ်။
အစထဲ က သဘောတူ မထားရသေးတဲ့ အချက်တွေ ကို လိုချင်ရင် (သို့) လိုအပ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ မျှမျှတတ ညှိနှိုင်း ပြီး လုပ်ဆောင် ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Commissioning Activities တွေ ကို Project Phases တွေ အလိုက် ကြည့်မယ် ဆိုရင်။
Develop Commissioning Scope
Review Design Intent
Owner may employ Commissioning Agent for Comprehensive Commissioning
Design to accommodate Commissioning
Identify commissioning scope
Commissioning Test Details
Manage Commissioning Process: Meetings, Plan & Schedules
System Verification Checks and Documents
Equipments System Start-ups
Carry out TAB (Testing, Adjusting and Balancing)
Verify TAB results
Train O&M Staffs
Compile Final Commissioning Reports
Carry out any "off season" functional performance tests
ဘယ် Systems တွေကို Commissioning လုပ်မှာလဲ၊ ဘယ်လောက်အဆင့် အထိ လုပ်မှာလဲ။ ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ ဆိုတာ တွေ ကို အတိကျ နိုင်ဆုံး သတ်မှတ် ပေးရပါမယ်။ Building MEP Systems အများစု ကို Commissioning Agents တွေက Commissioning လုပ်ပေးဘို့ တာဝန်ယူ နိုင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ။
Building Automation Systems (or) Building Management Systems
Commissioning Agency ရဲ့ Specialty ကိုလိုက်ပြီး ဘယ် Systems တွေ ကို လုပ်နိုင်မလဲ စစ်ဆေးဘို့ တော့ လိုအပ်ပါမယ်။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ Contract Specifications တွေ အရ Systems တွေ အကုန်လုံး ကို Commissioning လုပ်ဘို့ လိုအပ်ချင် မှ လိုအပ်မှာပါ။
Contract Specifications ထဲက သဘောတူညီ မှုကို လိုက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Contractors တွေ ကပဲ Commissioning လုပ်တာ၊ (သို့) သူတို့ နှစ်သက်တဲ့ Commissioning Agent (Third Party Specialist) ငှား လုပ်စေတာ တွေ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ( လိုအပ်ရင် Owner ကို အသိပေးပြီး သဘောတူညီမှု ရယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
အထူး Specialists Systems တွေ ကိုတော့ Specialist Contractors တွေ က နေ Commissioning လုပ်ပေးရနိုင် ပါတယ်။ ဒီအခါ သူတို့ရဲ့ သီးသန့် Commissioning Plans တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
တကယ် လုပ်ရမဲ့ Commissioning Procedure ရဲ့ ပထမဆုံး အဆင့်ပါ။ အစီအစဉ် နဲ့ လိုအပ်မဲ့ စာရွက်စာတမ်း တွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်မှု တွေ လုပ်ရတဲ့ အဆင့် လို့ ဆိုပါတော့။
Commissioning Specifications & Acceptance Criteria
Commissioning Process ရဲ့ လိုအပ်ချက် အားလုံး ကို သတ်မှတ်မဲ့ Detail Specifications လိုအပ်ပါတယ်။ ပါဝင်နိုင်တာတွေ ကတော့။
ပါဝင် ပတ်သက်ရမဲ့ Team Member တွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ Roles & Responsibilities (တာဝန်များ) အကျဉ်းချုပ်။
သက်ဆိုင်ရာ Service အလိုက် ပတ်သက်သူ တွေ ရဲ့ Detail Responsibilities
Commissioning လုပ်မဲ့ Systems, Equipments & Interfaces တွေရဲ့ စာရင်း။
Field Installation Verification Requirements
Functional Performance Tests Requirements including Testing Instruments Specifications & Calibration Requirements
Documentation Procedure and Requirements
O&M Staff Training Requirements
Commissioning Scope & Specifications တွေ ကို မှီငြမ်းပြီး ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ သတ်မှတ်ပေးမဲ့ Action Plan ဖြစ်ပါတယ်။
Identify the Commissioning Team
Identify each Team member's responsibility and authority
Identify the Commissioning Scope of the specific project
Identify communication protocols for the specific project. Include startup meetings, progress meetings, and written communication procedures.
Identify commissioning work flow. Includes weekly field report, start up observation reports, system check forms, equipment check forms and final report
Maintenance Manual Review Procedure
O&M Staffs Training / Turn Over Seminar Outline
Interfacing with Design Documentations
Owner က စောစောထဲက ခန့်ထားလို့ ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့ ရင် Owner က Designer ကို ပေးတဲ့ Engineering Parameter တွေ ကို နောက်ပိုင်း မှီငြမ်းနိုင်ဘို့ Documented လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Design & Specification တွေ ရတဲ့ အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ Design Parameters တွေ ရအောင် Commissioning လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင် နဲ့ အခက်အခဲ တွေ ကို သိရှိနိုင် စေဘို့ အတွက် သေသေချာချာ ဆန်းစစ် စစ်ဆေးရမှာ တွေ ကတော့။
Ability of Systems to be balanced
Maintenance access and maintainability of system
Commissioning Methodology (Method Statements)
လုပ်မဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် အသေးစိတ် ကို အစီအစဉ် အလိုက် စနစ်တကျ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ် ရှင်းတမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Method Statements တွေ မှာ ပါဝင်နိုင်တာ ကတော့။
ဘာ Tools & Instruments တွေ သုံးမယ်။ ဘာတွေ လိုအပ်တယ်။
ဘယ် Form တွေ ကို သုံးပြီး ဘယ်လို Document လုပ်မယ်။
ဘယ်ကစမယ်။ ဘာတွေလုပ်ရမယ်။ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် လုပ်ရမယ်။
ဘာတွေ ကို ဘယ်အချိန် မှာ Verify လုပ်ရမယ်။ ဘယ်သူက verify လုပ်မယ်။
လက်ခံနိုင်တဲ့ Criteria တွေကဘာတွေလဲ။ Remedy လုပ်ဘို့ လိုအပ်ရင် လုပ်မလဲ သတ်မှတ် မဲ့ Corrective Action Plan တွေ ကရော ဘယ်လို တွေ လုပ်ရမှာလဲ။
Testing Reports Formats
စနစ်တကျ Documented လုပ် သိမ်းဆည်းနိုင်ဘို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ Forms တွေ ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ စစ်ဆေးရမဲ့ အချက်တွေ ကို ပါထည့်သွင်း ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Forms တွေ ကို အကြမ်းအားဖြင့် ငါးမျိုး ခွဲခြား နိုင်ပါတယ်။
: အသိပေးဘို့ အတွက် သုံးတာပါ။ ဥပမာ။ ။ Inspection Request Forms, Corrective Action Request Forms
Installation Verification Check Forms
Integrity Testing Check Forms
Start-up Check Forms
Operational & Functional Performance Test Check Forms
ဒီအဆင့် ကတော့ Commissioning Procedure ရဲ့ ဒုတိယ အဆင့်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင် ထဲမှာ တကယ် လက်တွေ့ စစ်ဆေး မှတ်တမ်းတင် ရတဲ့ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆင့် မှာ Method Statements, Forms, Procedures, Protocols,… စတဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း တွေ၊ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ပါဝင်သူတွေ ရဲ့ တာဝန် နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရယ် က သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိနေပြီး ဖြစ်နေရပါမယ်။
သုံးမဲ့ Instruments တွေက လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ Acceptable accuracy ရှိရပါမယ်။ Instruments ရဲ့ အရေးပါမှု နဲ့ သက်တမ်း ကို လိုက်ပြီး Unexpired Calibration Report တွေလည်း လိုအပ်ကောင်း လိုအပ် နိုင်ပါတယ်။
Pre-commissioning: Field Installation Verifications (or) System Verification Checks (SVCs)
Installation inspection and checks
Installation Integrity Tests
Produce Observation Verification Report
Equipment & System Start-ups
ဒီအဆင့် ကတော့ Commissioning Procedure ရဲ့ တတိယ (အပြီးသတ်) အဆင့်ပါ။ Field Commission Reports တွေနဲ့ အတူ အခြားလိုအပ်မဲ့ စာရွက်စာတမ်း တွေ ကို စနစ်တကျ ပြုစု မှတ်တမ်းတင်မှု တွေ နဲ့ သင့်တော်တဲ့ လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးမှု တွေ၊ လုပ်ရမဲ့ အဆင့်ပါ။
စကာင်္ပူ မှာ NEBB Certified Firms လေး၊ ငါးခု လောက် ရှိပါတယ်။ အချို့က Cleanroom Performance Testing လုပ်ပေးနိုင်ပြီး အချို့ကတော့ HVAC System Commissioning လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲ က စာရေးသူ တွဲလုပ်ဘူးတဲ့ Firm နှစ်ခု ကတော့။
Cesstech (S) Pte Ltd : Cleanroom Performance Testings
CMD Services (SEA) Pte Ltd : HVAC System Commissioning
အခု အချိန်မှာ Supply ထက် Demands ကပိုများတော့ ဒီ Firms တွေလည်း အရမ်း အလုပ် များပါတယ်။
Cesstech (S) Pte Ltd ကတော့ Cleanroom Performance Testings တွေ ကို အဓိက လုပ်ပါတယ်။ စာရေးသူ အတွေ့အကြုံ အရတော့ Professional and Technically Very Cooperative ပါ။ Cleanroom Performance Testings တွေ ကလည်း တိကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ။
CMD Services (SEA) Pte Ltd ကလည်း HVAC System Commissioning ကောင်းကောင်း လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်း ရှိတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ 8 years ago လောက်တုန်း က တွဲလုပ်ခဲ့ ဘူးပါတယ်။ အစပိုင်း မှာ ပညာပြတာ ခံရမလို ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း မှာ တော့ ဆက်ဆံရတာ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ စကာင်္ပူ မှာ က HVAC Commissioning သတ်မှတ်ချက် အတိအကျ သတ်မှတ်ချက် မရှိသေးတာ မို့ Standard က လိုအပ်သလို အတိုးအလျှော့ လုပ်ချင် လုပ်နိုင်တာ မို့ပါ။ Commissioning Process မစရသေးခင် အစပိုင်း မှာ သူတို့ Representative က NEBB Procedures နဲ့ Forms တွေ မသုံးပဲ စာရေးသူ ဆီ Present & Submit လုပ်လာ ဘူးပါတယ်။ Sub-Contractor ရဲ့ QA နဲ့ အတူ လာတာပါ။ စာရွက်စာတမ်းတွေ ကို ကြည့်ပြီး စာရေးသူ က ဒါပဲလား မေးတော့ Representative က စနစ်တကျ လုပ်ထားသလို ခပ်တည်တည် ခပ်တင်းတင်း နဲ့ ဖြေပါတယ်။
အဲဒီ့ အချိန် မှာ စာရေးသူ ကလည်း NEBB Procedures တွေ ကို အထိုက်အလျောက် လေ့လာပြီးသားမို့ (ငါ အချဉ် မဟုတ် ပုံစံနဲ့။) သူတို့ လာတင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း တွေ ကို ဆက်လည်းမစစ်၊ လက်လည်း မခံ ပဲ ပြန်သွားစစ်ပြီး သေချာမှ ပြန်လာတင်ဘို့ ပြောလိုက် ပြီးတော့မှပဲ တကယ့် NEBB Procedures တွေ နဲ့ စနစ်တကျ ပြန်လာ ပါတော့တယ်။
NEBB Procedure အတိုင်း လုပ်ပေးရဘို့ Contract Obligation မရှိရင်တောင်မှ သူတို့လုပ်ပေးမဲ့ အစီအစဉ် ကို သေချာစစ်ပြီးမှ လက်ခံ သင့်ပါတယ်။
"AABC Commissioning Guideline", Associated Air Balance Council, 2002
"NEBB Procedural Standards for Building System Commissioning", National Environmental Balancing Bureau
WBDG: Building Commissioning, National Institute of Building Sciences [ http://www.wbdg.org/project/buildingcomm.php ]
AABC (Associated Air Balance Council)[ http://www.aabc.com/ ]
[ http://www.ashrae.org/ ]
NEBB (National Environmental Balancing Bureau)[ http://www.nebb.org/ ]
[ http://www.smacna.org/ ]
NEBB Certified Firms in Singapore
[ http://www.nebb.org/index.php?option=com_jumi&fileid=6 ]
Acceptable standard = Ambiguous ( On the mercy of owner’s agent… ), what standard?
Testing Instruments & Tools: Accuracy and Calibration
Realistic performances - eg temperature & humidity tolerances
အဓိက က ရည်ရွယ်ချက် တော့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေး သုံးခု ကို သေချာ ရနိုင်စေဘို့ပါ။
Integrity: ဒါဏ်ခံနိုင်စွမ်း ရှိမရှိ။ ဥပမာ။ ပိုက်တွေ က သတ်မှတ် Test Pressure ကို ခံနိုင်ရည် ရှိတယ်။
Operational Performance: အလုပ် လုပ်မလုပ်၊ ဥပမာ။ ။ Pump ကို On လိုက်ရင် ရေမောင်းတင် တယ်။
Functional Performance: အရည်အသွေး ရမရ၊ ဥပမာ။ ။ Pump က လိုအပ်တဲ့ Pressure နဲ့ Water Flowrate ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပါဝါ အတွင်းမှာ ပဲ သုံးပြီး ပေးနိုင်တယ်။
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 9:48 PM Labels: HVAC, MEP Systems, Testing and Commissioning